Firefox 3 Review, Rọbọt, Tinye-ons na Tweaks | Martech Zone
Fraịdee, June 20, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ ụbọchị nke abụọ Mozilla Firefox 3 na m na-ama chụpụrụ Safari si m n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ihe nchọgharị ahụ bụ ọsọ ọsọ (Ana m echepụta ruo mgbe m niile na-ewu ewu tinye-ons na mmelite nche ole na ole abata). Ekwenyere m na ọ bara uru nkwalite ahụ ma enwere m ike ichere ụbọchị ole na ole ruo mgbe mgbakwunye ga-adị ọsọ.
Mmezi Amalite na na Okirikiri nhọrọ ukwuu
Mgbanwe kachasị dị anya mgbe ị malitere FF3 bụ bọtịnụ azụ dị ukwuu na toolbar. Ekele diri ndi otu interface na mgbanwe a. Ladị usoro usoro sistemụ nke ngwa dị iche iche dị mkpa site n'ọkwá, mana ndị na-emepụta Mozilla kpebiri ime ya site na ịbawanye bọtịnụ azụ. Nke a bụ nnukwu mgbanwe… ndị ọrụ o yikarịrị ka ha ga-eji bọtịnụ a karịa ndị ọzọ; dị ka a N'ihi ya, na size na n'ọnọdu bụ oké ndozi.
Tfọdụ Tweaks na Firefox 3
Ọ bụrụ na ị pịnye banyere: config na url mmanya na Firefox 3, ị nwere ohere ụfọdụ ntọala ụfọdụ na - atọ ọchị - ma dị egwu. Ndị a bụ ụfọdụ ọkacha mmasị m m gbanwetụrụla:
izugbe.anwuOnAboutConfig - ma ọ bụrụ na ịchọọ ịdọ aka ná ntị mgbe ị meghere banyere.config, pịa ugboro abụọ iji gbanwee ịdọ aka ná ntị Fgha.
ihe nchọgharị.urlbar.auto Mezue - Pịa abụọ na Eziokwu na URLs gị ga-emezigharị na-adabere na akụkọ ihe mere eme gị.
brauza.urlbar.doubleClickSelectsAll - pịa abụọ na eziokwu na mgbe ịpịrị abụọ na mmanya url gị, ọ ga-ahọrọ URL niile kama ịhọrọ ya.
Izugbe.smoothScroll - pịa abụọ na TRUE wee pịgharịa peeji ndị dị na ihe nchọgharị gị nke ọma.
layout.spellCheckDefault - setịpụ nke a na 2 ma nwee ike ịlele nyocha niile, ọ bụghị naanị mpaghara ederede!
Akwa Ista: Ozi sitere na Ndị robot
ụdị banyere: robot na url mmanya maka nnukwu chuckle! Ọ dị mma ịhụ ndị mmepe nwere ihu ọchị. Achọrọ m ka ọtụtụ ngwa ga-agbakwunye Ista Ista dị ka nke a.
banyere: mozilla bụ akwa ọzọ (echere m na ọ dị na ụdị nke ọ bụla).
Nke Add-on m na-enweghị ike ime n'enweghị
Ihe mgbakwunye Bookmark na-atọ ụtọ dị egwu. Ọ bụrụ n’ịchekwa ibe edokọbara na ihe nchọgharị gị, Kwụsị ya! Del.icio.us na-enye gị ohere ịkekọrịta njikọ, hazie ha, pịa ha, na ọbụna biputere ha na blog gị.
The atụmatụ m chọrọ nwere ike emelitere
Akụkụ dị na Internet Explorer na-amasị m na agba url mmanya na-acha akwụkwọ ndụ na saịtị echedoro. Ọ bụrụ na e nwere banyere: config na-eme nke ahụ.
Tags: adobeibiaghachiụba ọnụegogaga.jsalgorithm ọchụchọ googlenjikwa faili googleomnitureakukosaịtịcatalystịkpado
Jun 20, 2008 na 7:38 AM
Re: green URL bar - FF3 na-agba agba nke URL mmanya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ị gara na saịtị ụfọdụ. N'elu nke ahụ, kama naanị favicon na-apụta n'aka ekpe, aha ụlọ ọrụ ahụ na-egosipụtakwa (ha abụọ pụtara na ndabere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ).
Echere m na o nwere na-eme na nche akwụkwọ n'ihi na mgbe ị hover gị òké n'elu shaded ebe ị nweta a tooltip na-ekwu, "Kwadoro site: Verisign, Inc."
Jun 20, 2008 na 9:06 AM
Hm. Enwere m mmasị na anya nke bọtịnụ gị, mana bọtịnụ FF3 m adịghị ka nke ahụ. Nke ahụ ọ bụ akpụkpọ ahụ ikekwe?
Jun 20, 2008 na 10:34 AM
Enweghị akpụkpọ, Michelle. Ngwaọrụ Windows m nwekwara anya yiri nke a.
Jun 20, 2008 na 9:23 AM
Michelle - bọtịnụ e setịpụrụ maka mac dị ka ọ dị iche karịa mgbe ị na-agba FF3 na pc. O nwere ike ịbụ ihe dị iche?
Jun 20, 2008 na 9:29 AM
M na-ejikwa Ibe edokwubara icioustọ, ọkachasị dị ka ụzọ iji kesaa ibe edokọbara n'etiti kọmputa. M na-eji isiokwu maka ụdị ibe edokọbara ya na “ff:” n’ihu. Ya mere, niile nke m ego ibe edokọbara na-akpado na "ff: ego" na-abụkwa akara dị ka zoro ezo. M nwere ike mgbe akara na mkpado dị ka ọkacha mmasị, n'ihi ya, ọ na-egosi na-atọ ụtọ toolbar na menu.
Robert Morgen kwuru
M na-eji uto, mana SocialMarker (http://www.socialmarker.com) nwekwara bọtịnụ ka anyị chekwaa ihe dị ka saịtị 30 maka ịdebanye aha mmadụ.
Handy maka ịgbasa blog posts. 🙂
Jul 3, 2008 na 12:08 PM
Anọ m na-eji FireFox 3 kemgbe beta 3 ma ọ bụ 4, ma ghọta na ogwe ọnọdụ na-eji ederede ederede zuru oke na aha URL niile nke akụkọ ihe mere eme gị. Ọ bụ ezie na ọ na-ewe nke abụọ ma ọ bụ abụọ iji chọọ data ahụ niile, nke a bụ nnukwu njirimara njiri mara na na mbụ echeghị m na mbụ, mana ugbu a ịhụnanya.